Andian-tsarimihetsika fahitalavitra tsara indrindra tamin'ny taona 90 | Omeo fialamboly aho
Andian-tsarimihetsika fahitalavitra tsara indrindra tamin'ny taona 90
Ny namana dia iray amin'ireo andiany malaza indrindra tamin'ny taona 90
Raha anisan'ny taranaka an'arivony taona ianao, dia azo antoka fa manana zavatra lehibe manina ny taona 90. Tsy nisy WhatsApp, Facetime ary tsy lazaina intsony ny Netflix sy ireo sehatra streaming hafa. Na izany aza, raha nihalehibe ianao nandritra izany fotoana izany dia azo antoka fa nihaino ny mozikan'ny Spice Girls sy ny Backstreet Boys ianao; Nahamarika anao ihany koa ny lamaody miloko amin'ny firavaka, akanjo sy kojakoja volo. Emojis no voalohany niseho ny endrik'izy ireo kely! Tena lamaody ny mamaky magazine ary miandry isan-kerinandro ny toko vaovao amin'ny seho tianao indrindra. Izany dia noho izany Amin'ity lahatsoratra ity dia manome voninahitra ireo andian-tsarimihetsika fahitalavitra tsara indrindra tamin'ny taona 90 izahay.
Miaraka amin'ny haitao rehetra ananantsika androany dia afaka jerentsika amin'ny sehatra rehetra izy ity. Miaina indray ny fahatsiarovana! Ankafizo ity diany mandeha ara-potoana ity!
1 Ny printsin'i Bel Air
4 Sabrina, mpamosavy
5 Buffy ilay Vampire Slayer
6 Sense miaina (90210)
7 Andriamatoa Bean
8 Ny Baywatch
9 Rahavavy rahavavy
10 Tian'ny rehetra i Raymond
11 Trano botched
12 File X
14 Ilay mpitaiza
Ny printsin'i Bel Air
Ny andiany amerikana dia nalefa tamin'ny 1990 ka hatramin'ny 1996; 6 vanim-potoana no namokarana niaraka tamin'ny fizarana 148. Ny mpilalao fototra dia i Will Smith, izay 22 taona tamin'izay. Miorina amin'ny a Zazalahy avy any Filadelfia izay nirahina hiaina miaraka amin'ny havany manankarena noho ny fangatahan'ny reniny.
Ny mahery fo dia tovolahy tsy miraharaha, zatra miaina amin'ny fomba milamina, "mikapoka" ary milalao basikety amin'ny fotoanany. Rehefa mifindra any Bel Air izy miaraka amin'ireo nenitoany sy dadatoany manan-kery, dia miara-miaina amin'ireo zanak'olo-mpiray tam-po aminy efatra miaraka amina fomba amam-panao izy, izay avadik'izy ireo amin'ny fomba amam-panao maro samihafa. Tamin'izany fotoana izany dia iray tamin'ireo fandaharana nisy mpihaino avo indrindra ary nanamarika ny fanombohan'ny asa lehibe nataon'i Will Smith.
Ny tantara amerikanina dia mifototra amin'ny tranga toe-javatra maika vonjy taitra. Milaza ny fiainana sy ekipa manokana sy matihanina amin'ny hopitaly foronina iray ao an-tanànan'i Chicago izy io ary mandray marary manana tranga tsy mahazatra izay mila vahan'izy ireo eo noho eo mba hamonjy ny ain'ny marary. George Clooney dia tao amin'ny ekipan'ny dokotera mpitarika!
Vanim-potoana 15 no namboarina niaraka tamin'ny fizarana 331 izay nifarana tamin'ny 2009 ary nanomboka tamin'ny 1994.
Izy io dia natambatra ho iray amin'ireo andian-tsarimihetsika miaraka amina loka be indrindra.
Andian-tantara komity izay nihazakazaka 10 taona niaraka tamin'ny vanim-potoana 10. Izy io dia heverina ho iray amin'ireo fahombiazana indrindra tamin'ny fotoana rehetra! Notantaraina ny fiainana isan'andro misy namana enina: Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Ross ary Joey. Mipetraka any New York City izy ireo ary mizara fifandraisana tena akaiky ny fisakaizana tena izy izay nipoitra ny fitiavana. Miaina ny karazana toe-javatra mitranga amin'ny olon-tsotra izy ireo: ny raharaha fitiavana, ny ratram-po, ny olana amin'ny asa, ny toe-javatra sarotra misy eo amin'ny fianakaviana ary ny dia mahafinaritra, mba hanomezana ohatra vitsivitsy. Miaina mifanakaiky daholo izy rehetra ka mivory ao anaty cafeteria daholo matetika.
Ny andian-tantara dia manana hatsikana mahatsikaiky, indrindra miaraka amin'i Joey sy Phoebe ho iray amin'ireo mpilalao mahatsikaiky indrindra izay mahazo mihoatra ny fihomehezana.
Ity andiany ity dia nanamarika ny asan'ireo mpihetsiketsika rehetra, izay nanohy ny asany tamin'ny efijery lehibe ary, amin'ny ankabeazany, dia mitohy manankery.
Mpilalao sarimihetsika amin'izao fotoana izao i Melissa Joan Hart milalao Sabrina Spellman a Mpampianatra mpamosavy iray izay mahita fa 16 taona izy dia manana hery majika. Mipetraka miaraka amin'ireo nenitoany roa izy, Hilda sy Zelda izay niaina nandritra ny 600 taona mahery ary mpanao ody ihany koa. Manana an'i Salem ho toy ny biby fiompy, saka miteny ary sariaka izy ireo amin'ity andiany ity. Ny fandaharana dia natomboka tamin'ny taona 1996 ary ny fizarana farany navoakany tamin'ny 2003.
Sabrina dia mianatra any amin'ny sekoly fiomanana amin'ny maha-zazavavy mahazatra ary ny tetika dia milaza ny fomba fampivelarany ny fiainany ho lasa mpamosavy manam-pahaizana sy olon-dehibe manana andraikitra amin'ny tontolo tena izy izay ilàny hitazona ny heriny eo an-tsisiny. Nisy triangles fitiavana nipoitra nandritra ny oniversite ary ny faran'ny andian-tantara dia mitantara ny fampakaram-badin'ilay mahery fo.
Amin'ny ankapobeny, ny fizarana tsirairay dia milaza tantara hafa izay tsy mifandraika mivantana amin'ny fizarana teo aloha ary samy manana karazana fitondran-tena ny tsirairay amin'izy ireo. Tsy isalasalana fa iray amin'ireo andian-tantara mahafinaritra indrindra hijerena ireo tanora tamin'izany fotoana izany!
Buffy ilay Vampire Slayer
Nivoaka tamin'ny rivotra nandritra ny enin-taona (1997-2003) izy niaraka tamin'ny vanim-potoana fito. Ny mahery fo Buffy Summers, nolalaovan'i Sarah Michelle Gellar. Izy dia mpamono vampira tanora izay manandrana miaina ny fiainany amin'ny fomba "mahazatra" faran'izay mety. Mandritra ny teti-dratsy dia manaiky ny anjarany izy ary miaraka amin'ny fanampian'ny mpiambina dia lasa mpiady tsy an-kijanona manohitra ny herin'ny maizina izy.
Mandritra ny toko tsirairay dia mila miady amin'ny vampira sy demonia marobe manafika ny zanak'olombelona ianao.
Ny hafa manana lohahevitra mitovy amin'izany dia mipoitra avy amin'ity andiany ity, toa ny raharaha Angel.
Sense miaina (90210)
Nandefa nandritra ny 10 taona (andiany 1990 ka hatramin'ny 2000) ny andiany ary nalefa tamin'ny FOX tany Etazonia tamin'ny voalohany, taty aoriana dia lasa fahombiazana iraisam-pirenena. Ny andiana opera savony dia momba ny vdia tombon-tsoa azon'ny vondrona mpianatra ambaratonga faharoa ao an-tanànan'i Beverly Hills. Ny vanim-potoana voalohany dia nifantoka tamin'ny fiainan'ny mpirahalahy Walsh, taty aoriana ny temotra dia nanjary nanjary ankapobeny tamin'ny lohahevitry ny tanora.
Brandon, Brenda, Kelly, Steve, Donna ary Nat dia anisany mpiaro ny seho mampiady hevitra.
Izany dia Andian-tsarimihetsika starring ny mpilalao amin'ny anaran'ny andian-dahatsoratra. Izy dia avy any Angletera ary ireo toko dia misy tetika isan-karazany, ny tena lehibe amin'ny fitondran'Andriamatoa Bean dia mifototra amin'ny fifandraisana amin'ny fambara amin'ny ankapobeny.
Ny fisehoan-javatra, ny toetra amam-panahy ary ny fomba famahana ny olan'ny mahery fo dia mamorona seho tsy manam-paharoa izay mahafinaritra tokoa ny mijery!
Naharitra dimy taona izany: ny taona 1990 ka hatramin'ny 1995 ary avy eo sarimihetsika roa no naseho tamin'ny 1997 sy 2007.
Azo antoka fa iray amin'ireo andian-tsarimihetsika avo indrindra amin'ny folo taona! Ny mpamonjy voina masoandro, fasika, ranomasina ary sarivongana eny amoron-dranomasina no tena nahasarika mandritra ny 10 taona. Ny fizarana tsirairay dia nahitana niainany samihafa ary nahatafiditra olona hitahiry amin'ny toe-javatra sarotra tokoa.
Nihazakazaka nandritra ny vanim-potoana iraika ambin'ny folo ny andiany ary nifarana tamin'ny 2001.
Mpanakambana kambana mitovy amin'i Tia sy Tamera Mowry, mitantara ny tantaran'i roa vavy kambana roa nisaraka tamin'ny nahaterahany. Samy natsangan'ny ray aman-dreny samy hafa izy ireo ary mifankahita indray rehefa 14 taona. Taorian'ny fihaonana tsy nampoizina dia nanao fandaharana izy ireo mba hiara-hiaina sy hihaona amin'ny farany. Samy manana ny toetrany samy hafa izy ireo, izay tena mahafinaritra ny fizarana tsirairay.
Ny fiaraha-miaina eo amin'ny ray aman-dreny nitaiza azy dia tena miavaka ihany koa.
Nanomboka tamin'ny 1994 ka hatramin'ny 1999 ny seho.
Tian'ny rehetra i Raymond
Miorina amin'ny a Fianakaviana italianina-amerikana misy ray aman-dreny sy zanaka telo. Ny ray aman-drenin'i Raymond, ny raim-pianakaviana, dia mipetraka ampitan'ny arabe. Noho izany dia lasa fitsidihana tsy tapaka sy mahasosotra izy ireo indraindray izay miteraka toe-javatra mampihomehy maro an'isa.
Amin'ny ankapobeny, ny lohahevitra lehibe dia ny fifandraisan'ny mpivady sy ny fifanolanana nateraky ny olona samy hafa mandalo dingana samihafa amin'ny fiainana.
Izy io dia iray amin'ireo andiany nahazo loka indrindra nandritra ny folo taona ary iray izay tena nampiroborobo ny asan'i Tim Allen.
Ny seho dia mitantara ny fiainan'ny a mpampiantrano fahitalavitra izay lohahevitra lehibe ampianariny ny fampiasana ny fitaovana marina ka ny mpijery dia afaka manatsara an-trano irery. Mandritra izany fotoana izany, ny mpihetsiketsika dia tsy maintsy miatrika vady manjakazaka sy zanaka telo izay mamorona toe-javatra mampihomehy.
Ny andian-tantara miafina momba ny siansa momba ny tontolo terestrialy fanampiny sy zavaboary hafahafa. Manodidina ireo olana ireo dia namorona rakitra miafina notadiavin'i agents FBI roa: Mulder sy Scully. Feno ahiahy, ny fizarana tsirairay dia nitantara tranga miafina samihafa izay niteraka fisalasalana lehibe teo amin'ireo mpijery.
Nivoaka nandritra ny 9 taona izy niaraka tamin'ny loka 61 nomen'ny masoivohom-pirenena isan-karazany, anisan'izany ny Emmy Awards sy ny Golden Globes.
Nalefa praiminisitra tamin'ny 1993 ary niteraka vanim-potoana 11 nifarana tamin'ny 2004. Dr. Frasier dia mpitsabo tena mahomby amin'ny fandaharana amin'ny radio any Seattle. Mizara ny torohevitra sy ny fahitana tsara indrindra azony amin'ny mpihaino azy izy, kanefa tsy maintsy miatrika olana amin'ny fiainany ihany koa izy.
Ny psychiatrista malaza dia misara-panambadiana ary miaina miaraka amin'ny rainy sy ny alika antsoina hoe Eddie. Mitsidika azy ireo tsy tapaka ny rahalahin'izy ireo manahirana.
Ny café Nervosa cafeteria dia iray amin'ireo toerana notsidihin'ireo mpihetsiketsika indrindra ary toeran'ireo niainany maro.
I Fran Fine, ilay maherifo, dia vehivavy manana firazanana jiosy izay mivarotra tarehy isan-trano any amin'ny tanànan'ny New York. Tsy nahy izany cNotolorana ho mpitaiza zazalahy kely kilasy ambony zanaky ny mpitondratena tsara tarehy antsoina hoe Maxwell Sheffield, izay mpamokatra Broadway koa.
Ny fizarana tsirairay dia misy andiana fikorontanana mila vahan'i Fran miaraka amin'ny fanohanan'ny namany Butler Niles. Ny reniny sy ny renibeny dia iray amin'ireo olona mahatsikaiky indrindra amin'ity andiany ity.
Naharitra enin-taona ilay seho ary niteraka sary mihetsika an-tsehatra taona maro taorian'ny nifaranany.
Manantena aho fa nahafinaritra ity dia ity! Mila mitady ny sehatra mety fotsiny ianao mba hankafizanao indray izay heverinao fa andiany fahitalavitra tsara indrindra tamin'ny taona 90.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Omeo fialamboly aho » General » Andian-tsarimihetsika fahitalavitra tsara indrindra tamin'ny taona 90
Sarimihetsika hijerena mpivady